Xoghayaha Guud ee Urur Gobaleedka IGAD oo Xilkiisa la Wareegay - Awdinle Online
Xoghayaha Guud ee Urur Gobaleedka IGAD oo Xilkiisa la Wareegay
November 08, 2019 (Awdinle Online) – Xoghayaha Guud ee Urur goboleedka IGAD u magacaabay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa si rasmi ah ula wareegay xilkiisa, iyadoo uu jiray muran badan oo ka taagan magacaabistiisu ay ka dhex jirto wadamada ku bahoobay Ururka IGAD.
Dr. Workneh Gebeyehu Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Itoobiya ayaa xilkaas kala wareegay Eng. Maxbuub Maalim, waxaana xilka Xoghayaha Guud ee Urur Gobaleedka IGAD loo magacaabay 22-kii bishii October ee isla sanadkan.
Xoghayaha cusub oo ah Itoobiyaan ayaa waxaa magacaabay Dr. Abiy Axmed oo xiliga ah Gudoomiyaha Ururka, isagoo aan kala tashan madaxda kale ee dalalka xubnaha ka ah Urur Gobaleedka IGAD.
Soomaaliya iyo Jabuuti oo doonayey in xilkani meerto nooqdo ayaa si weyn uga soo hor jeestay magacaabista aan laga tashan ee uu sameeyay Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed.
Xilkan oo ahaa mid wareegto ayaa waxaa la isku ogaa in la siiyo Soomaaliya oo aad u daneyneysey, waxaana u sharaxanaa oo labo sano ka hor waraaqihiisa la gudbiyey Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Cabdisalaan Hadliye Cumar oo in mudo sugaayey in uu xilaasi qabto.
Talaabadan ayaa waxaa ay u muuqataa in xilkan laga xoogey Dowladda Soomaaliya loona adeegsadey xirfad siyaasadeed, waxaa kaloo xusid midan in Gudoomiyaha Guud ee Urur Gobaleedka IGAD uu la wareegi doono Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
isha wararka sugan awdinle.com
Previous articleSawiro:- Dowladda Ingiriiska oo Tababareysa Ciidanka Xoogga Dalka
Next articleSomali farmers in Gedo lose livelihoods to Juba river floods